Tarea de word by naely1992 143 views
Midsize webinar by Sean O'Connell 376 views
Internship report by Akira Toyokawa 533 views
7 สามัญ ภาษาไทย by Warangkana Singthong 250 views
Presentation1 by carolinebirksatwork 239 views
Deportes edicion imagenes by Yasmin SM 85 views
1. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
2. အ .အ .အ အ အ အ အ အအ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အအ အ အအ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
3. ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ
4. ဂ ဂ ဂ ဂဂ ဂ ဂ ဂဂ ဂ ဂ ဂ ဂဂ ဂ ဂဂ ဂ ဂ ဂ
5. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
6. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
7. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
8. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ
9. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
10. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
11. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ
12. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
13. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ
14. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
15. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
16. အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ
17. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
18. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
19. အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
20. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
21. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
22. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
23. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
24. အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
25. အ အ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အအ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ အ
26. က က က က က က က က က က က က က က က က က ကက က က က ~~~~ က က က ကက က က ကက က က က က က က က က က က …က က ကကက က က ကက က က က က ကက က က က က က က က က က က ~~~က က က က က … က က က က ကက က က က က က အ အ ကအ အက က က က က က က က က ~~~ က အ က အ က က က အ အ အ ကအ အ က အ အ အ အ အ အ အက က က က က က က က …… က က က က က က က က